true communication /zu-ZA/tools-for-life/communication/steps/what-is-communication.html read 9 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/communication_zu_ZA.jpg UkuXhumana
9.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Le-drill ikufundisa ukuthi ungayicela kanjani into kaninginingi, kepha isikhathi ngasinye uyibuza kabusha, kube sengathi ayikaze ibuzwe phambilini futhi ubusanda kuyicabanga. Leli khono liyasiza uma umbuzo owubuzayo ungaphendulwanga futhi udinga ukuwubuza futhi.
Kule-drill, ubuza umuntu ngaphesheya kwakho omunye wemibuzo elandelayo:
Le mibuzo isetshenziswa ngoba yimibuzo noma ngubani ongayiphendula. Khetha omunye wemibuzo oyisebenzisayo ku-drill bese uyisebenzisa kaninginingi. Ungahlanganisi lemibuzo emibili.
I-coach: Phendula umbuzo.
Wena: Lapho i-coach wakho esewuphendulile umbuzo, acknowledge impendulo.
Bese ubuza umbuzo ofanayo futhi, kabusha, kube sengathi akukaze kubuzwe phambilini futhi ubusanda kukucabanga.
Umfundi uyalungiswa uma ehluleka ukuthola impendulo yombuzo noma ehluleka ukuphinda umbuzo oqondile.
I-coach usebenzisa u-“Qala” kanye no-“Yilokho” njengakuqala kuma-TRs. Kodwa-ke, i-coach akaboshelwe ukuphendula umbuzo womfundi. Kunalokho angenza umbono ongawuphenduli ngempela umbuzo ukuze alahle umfundi. Isibonelo:
Umfundi: “Izinhlanzi ziyabhukuda?”
Umqeqeshi akaphendulanga umbuzo. Uma umbuzo ungaphendulwa, umfundi kufanele awuphindaphinde lowo mbuzo aze athole impendulo.
1. Ungawubuza kahle lo mbuzo, uphindaphinde, sengathi awukaze uwubuze ngaphambilini.
2. Uyakwazi uku-acknowledge impendulo ka-coach wakho njalo.